5 antony mahagaga hivezivezy any Afovoany Atsinanana Ity ririnina ity
Manomboka amin'ny Krismasy any Kairo ka hatrany Fondue any amin'ny morontsirak'i Mediterane
Ny Middle East dia ao anaty vaovao noho ny antony ratsy rehetra vao haingana, izay midika fa tsy fantatrao ny zava-mahagaga rehetra tokony hataonao any. Ny tena manokana, ny ririnina dia fotoana tsara hitsidihana ny Afovoany Atsinanana, na dia tsy mahatsapa ny iray amin'ireo lanezy mavesatra aza ny taona lasa. Na tianao kokoa ny morontsirak'i Mediterane na ny lava-pirahalahiana simenitra ao amin'ny Hoalan'i Persa, dia ireto misy antony tokony handinihana ny fandaniana ireo volana maizin'ny taona any Moyen-Orient-lavitra ny tsy firaharahan'ny TV misy anao!
Krismasy Coptic tany Kairo, Ejipta
Kairo no "Tanànan'ny Minaretsa 1,000," araka ny hita amin'ny mijery ny varavarankelin'ny ankamaroan'ny hotely any Cairo. Zavatra iray mety tsy tsapanao momba an'i Kairo, na izany aza, dia ny hoe any an-tokantranon'olona Kristiana, indrindra ny Coptic Christians, izay monina any amin'ny faritra iray amin'ny ren'ny renirano tranainy tsara tarehy.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny kôpta kôpta sy ny kristiana tsotra, ary iray amin'ireo olo-malaza indrindra no datin'ny Krismasy. Ny kôpta dia mankalaza ny fialantsasatra amin'ny voalohandohan'ny volana janoary, ka raha tonga any Cairo ianao amin'izao fotoana izao, dia manadino ny ketrika kôpta ho fankalazana ny Krismasy izay tsy hohadinoinao.
Diaben'ny Citrus any Jerosalema
Ny faritra manodidina an'i Jerosalema - ny tanànan'i Betlehema any West Bank - dia toerana iray tokony handaniana ny Krismasy, fa ny iray amin'ireo zavatra mahagaga dia mahakasika ny fanandramanao. Amin'ny ankapobeny, raha hitanao ny tsena vokarin'ny Machane Yehuda ao afovoan-tanàna ao akaikina trano fandraisam-bahiny ao Jerosalema, azonao atao ny mamela ny citrus israeliana mamokatra tahaka ny orana, ny lemon-driaka ary ny solila, ary koa ny voankazo miavaka toy ny ampongabendanitra, tampon'ny vokatra nandritra ny ririnina.
SOSO-KEVITRA: Manaova zava-mahadomelina sy mamelombelona ny tenanao amin'ny alàlan'ny fametrahana citrus ao an-toerana ao anaty ranom-boasary!
Mankalaza ny Andron'ny firenena ao Koety
Ny tanànan'i Kuwait sasany indraindray dia manadino ny tanànan'ny Golfer Persiana any Bahrain tahaka an'i Bahrain sy Dubai, saingy aza avela hamitaka anao ny fahamaotinana. Raha ny marina, ny "maotina" dia ho zavatra faran'izay bitika ao an-tsainao raha toa ka mahazo trano fandraisam-bahiny ao Koety ianao amin'ny 25 Febroary, rehefa manatrika ny fahaleovan-tenan'i Koweït ny fankalazana manontolo andro manerana ny renivohitr'i Koety.
Tombontsoa iray hafa hitsidihana an'i Kuwait mandritra ny ririnina? Ny vintana hahita orana, izay tena fitahiana eto amin'ity faritra ity, na dia maro aza ny mpizaha tany no mihevitra fa manelingelina izany.
Eat Fancy Fondue any Beirut
Ny herisetra Frantsay dia matanjaka ao Libanona ary ny fondue dia avy amin'ny faritra Frantsay any Soisa, noho izany dia tsy dia manaitra tanteraka ny mahita ny fofona malefaka sy voapetaka vetivety avy ao amin'ny hotely Beirut. Ny zavatra mety ho tonga amin'ny fahatairana dia ny hoe ny fomba nentim-paharazana dia miara-mikorana amin'ny morontsirak'i Libanona, rocky mediteraneana, masoandro mipetaka, ary ny alina mangatsiaka ny andro ririnina, izay ahafahan'ny setroka mivezivezy kely kokoa noho ny hatsiaka, indrindra raha ny rivotra avy any an-dranomasina.
Maro ireo toerana amoron-dranomasina akaikin'i Beirut no manohana, fa ho an'ny zava-niainana tena izy dia mitodika any amin'i Pierre sy Friends ao Al-Batrun. Mipoitra mivantana any amin'ny ranomasina izy io, izay miantoka ny fomba fijery masoandro amin'ny ririnina.
Mandehana Amin'ny Wadi Rum- Tsy Hisy Heating
Na dia tsy nahita an'i Lawrence Arabia aza ianao, dia mety nahita ny fasika tany amin'ny tany Wadi Rum ianao tany amin'ny nofinao. Raha mitsidika ianao mandritra ny fara-tampony amin'ny lohataona, dia mety ho tratran'ny oram-batravatra kokoa ianao, satria mahatratra 120 ° F ny mari-pana. Azonao atao ny manantena ny hivarotra kambana Bedouin nentim-paharazana ho an'ny hotely Wadi Rum, noho ny fanagadrana tanimandin'ny alina amin'ny vanim-potoana amin'ny taona, fa ny dian-tongotra an-dalan'ny ala sy ny filentehan'ny masoandro amin'ny rameva dia tsara indrindra.
Money Matters - toro-hevitra ho an'ny Afrika
Teny fanentanana momba an'i Afrika
South Luangwa National Park, Zambia: Torolalana feno
Torolalana ho an'ny Lalao Birao Afrikana Traditionnaire
Top 3 Asian Markets ao Sacramento
Tanora 10 sy trano fianarana ao Washington, DC
Ny Lalan'ny Hazavana any Texas Hill Lighting Regional
Profile of St. Paul's Merriam neighborhood
Ny 5 Best Sporting Events ho an'ny volana Novambra
William Butler Yeats - Poeta Irlanda miaraka amin'ny fifandraisana Sligo
Leeds Castle any England
Fantaro ireo zava-mahatalanjona voajanahary ao amin'ny ala mando Guánica
Photo Tour of Clyde Peeling's Reptiland any Allenwood, Pennsylvania
Dilli Haat: Ny tsena goavana Delhi izao dia mbola lehibe kokoa
Ny sangan'asan'i Fallingwater any Mill Run, Pennsylvanie